Ndinogadzira sei backlinks ye website yangu nenzira yakanakisisa?
Pamberi pezvimwe zvose, ngatishandisei - Google, pamwe nemamwe makuru ekutsvakurudza injini, haisi kutarisira kuvimba newebsite yako kana blog. Kana ndiri ini, ndaifanira kubhadhara nguva yakawanda uye simba kuti ndiite backlinks yewebsite yangu nechinangwa chimwe chete chiri nyore - kugutsira Google kuti webhusaiti yangu ndeyechokwadi, iyo inogona kuvimbwa nevanotsvaga kurarama, saka ichiita zvinonzwisisika kukoshesa kurumbidzwa uye kuratidzirwa kune vakawanda vakateerera pane urongwa hweSERPs. Mune mamwe mazwi, pandakanga ndichida kugadzira backlinks yangu webhusaiti, ndaifunga pamusoro pekubatanidza kwese sehutano hwechitatu. Nenzira iyo, ndaive ndichifambidzana nekurima kwehutano chete backlinks. Pakupedzisira - kuchinja webhusaiti yangu kuti ive yakakwana yakavimbika uye yakavimbika kunopa iyo inopa zvakakosha kukosha kumushandisi neyopakutanga uye yega yega yega yega.
Uye kune nzira dzakasiyana-siyana dzokugadzirisa mufananidzo wakasimba we backlink weSeO zvinangwa - restaurants chairs and tables. Uye kusika backlinks kwewebsite yangu, ini pachedu ndakatarisa pane zvakagadziriswa-kutanga uye zvakanyanya. Kwete nokuti ndakatora kuwana backlinks nehuwandu hwehutano hwakagadzirika chaizvo hwebhizimisi shoma, asi nokuti hunoshanda chaizvo - kusika zvinyorwa zvinobatsira zvinogona kuti zvinogamuchirwa kugovera, kugovana, nekubatanidza-shure kwezvose. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidza nzira dzakanakisisa dzezvakagadzirisa zvandakabudirira kushandisa zvinyorwa zvewebsite yangu, nekuvandudza huwandu hwangu hwe SEO kufambira mberi. Tevera matanho aya akajeka uye zvigadziro zvinosvika pakuwana zvakaenzana kubatsirana kwekubatanidza chikwata chekuvaka seyangu.
Sarudza Chinhu Chinoenderana Nevateereri Vako Zvakanakisisa
Chokutanga, funga zvakanaka kuti chii chinogona kugoverwa chingave chakanakisisa kune vavariro yako. Sezviri pachena, mune imwe niche kana bhizinesi rebhizimisi, vanhu vari kutsvaga zvinyorwa zvakanyorwa zvakanaka zvakakodzera kufadza, zvinobatsira uye zvakakosha - zvose mune imwe. Ingotarisa zvakapoteredza niche yako uye tora chisarudzo chakanaka pamusoro pemhando yehuwandu, iyo inonyanya kudyiwa nevadzidzi kuti vagoverwe pakuverenga, kutaurwa, kana kubatanidzwa. Nenzira yakawanda, iyo yakanakisisa yemhando inobatsira uye yakakosha inogadzirisa mazano ekutungamirira, zvidzidzo zvenyaya, mapeji, mabhuku ekuongorora uye mazano anobatsira uye mazano, sei-tos, etc.
Kutsvakurudza uye Kuvandudza Zvaunogona Kugovana Nayo Zvimwe
Zvose zviri pano zvinenge zvichitsanangurira - sezvese zvaunoda ndezvokuumba zvinyorwa zvinokosha nepfungwa huru yemashoko ekufunga. Ingotendera ichinyorwa kutsvakurudza neIndaneti yekuongorora zvishandiso zvinoratidza izvo vateereri vako vari kutsvaga, izvo zvinyorwa zvinonyanya kukoshekedzwa nevanhu, uye ndezvipi izvo zvinotarisirwa pakati pavo.
Ita Zvose Zvaunofunga
Hapana chirongwa chakakosha pamusoro apo, asi ndakasarudza kuva nebhuku rinokosha rekutsigira kambani yangu kuti iite backlinks kune webhusaiti yebhizimusi rangu. Uye iwe unogonawo kufunga kugadzira nzvimbo yekutengesa vashandisi vekuInternet, semuenzaniso nehurukuro dzepamusoro-dzinobatsira kana dzeMibvunzo & Mhinduro dzinowanzobvunzwa nevatengi vako. Nenzira iyo, hauzoiti kuti vanhu vakawanda vagoverane zvehupenyu hwako nekubatanidza kwauri asi kuvaka simba rako rakasimba uye kuvimba pakati pevashandisi. Uye iyo inogona kudiwa neGoogle, kupa zvikwiriso zvakakwirira kune iwe webhuweiti kana blog. Ita basa nguva dzose uye usaisa ruzivo kuisa nguva yako nesimba - izvo zvicharamba zvichibhadhara, ndine chokwadi.